Hery Rajaonarimampianina : « Aoka ny zavatra vita no hitarafana ny ho avy » -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : « Aoka ny zavatra vita no hitarafana ny ho avy »
11/08/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
“Tsy amin’ny lafin’ny fampianarana ihany, fa amin’ny lafin’ny fanabeazana ankapobeny no hametrahana fanamby. Tsy amin’ny lafiny ara-tsosialy ihany fa amin’ny lafiny ara-toekarena ihany koa. Mila fitoniana isika amin’ny asa fampandrosoana. Mila fitoniana maharitra eo amin’ny fitantanana ny firenena satria izay ihany no antoka handresena lahatra ireo mpamatsy vola sy mpampiasa vola ho avy eto Madagasikara, hanampy amin’ny resaka fampandrosoana”, hoy ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery, teny amin’ny kaomina Ampaneva, distrikan’i Manjakandriana omaly nandritra ny fanolorana sekoly vaovao ny fokontany
Ambohimanarivo. Isan’ny endrika iray hitarafana ny fampandrosoana tokoa ny sehatry ny fanabeazana satria io ihany no hahazoana olom-banona. Tetsy ankilany, nampahafantarin’ny Filoha ireo mpampianatra, ireo Ray aman-dreny ary ireo tanora tonga teny an-toerana ny lalana efa nosoritany entina hampandrosoana ny firenena, dia ny Fisandratana 2030. Tafiditra ao anatin’io ny fanandratana ny hambom-po iombonana, izay tokony hananan’ny olona tsirairay hanehoana ny tena fitiavan-tanindrazana. “Ny Filoham-pirenena efa nanomboka asa, ary ny asa efa natomboka dia tiana hotohizana ao anatin’ilay Fisandratana. Mila izany isika, mila mahafantatra ny ankizy, mila mahafantatra ianareo, ireo Ray aman-dreny amin’izay tian’ny fitondram-panjakana aleha. Hitondra fampandrosoana amin’ny inona. Izay no antony nanaovana ny Fisandratana 2030 satria anjara adidin’ny Filoham-pirenena no manoritra lalana, na iza na iza hitantana ny firenena. Ilaina izany, ary izany no tsy nisy teto amin’ny firenena hatramin’izay. Marihiko fa ireo firenena nandroso rehetra dia nila fandaminana, nila filaminana, nila fitoniana tao anatin’ny 10 taona na 15 taona. Ka aoka ao anatin’ny fifanampiana, fifanoloran-tanana, ao anatin’ny fitoniana no hametrahana ny fampandrosoana”, hoy hatrany ny Filohan’ny Repoblika tamin’ny mponin’Ambohimanarivo.
Mba hahatongavana amin’izany fampandrosoana izany hatrany, dia zava-dehibe ny fanovana toe-tsaina. “Mila manavao ny toe-tsaina, mitodika amin’ny fiaraha-mientan’ny maro an’isa. Mila manandratra ilay hambom-po iombonana isika fa lasa olon-ko ho azy, lasa mijery ny tenany amin’ny lafin’ny fampandrosoana, lasa nanjaka ny fitiavan-tena, lasa nanjaka ny kolikoly, lasa nanjaka ny herisetra… tsy mahagaga raha tonga amin’izao toerana izao isika. Antony mahatonga ahy manentana ny malagasy rehetra, andao hiara-hanarina ny firenena isika, andao hiara-hanarina toe-tsaina isika, ary mba hahazoana manarina ny firenena izay efa potika nandritra ny 50 taona mahery, dia mila ankizy, mila tanora hofanina, hamboarina, beazina ao anatin’ny toe-tsaina vaovao isika”, araka ny fanamarihan’ny Rajaonarimampianina Hery, Filohan’ny Malagasy.
Tsy vitan’ny Filoha samirery anefa izay fampandrosoana ny firenena izay fa ilaina ny fiaraha-mientan’ny rehetra satria ny tanjona dia hiadiana amin’ny fahantrana lalina iainan’i Madagasikara. “Mila anao izy amin’izany. Mila anao vehivavy izy, mila anao lehilahy izy, mila anao tanora izy, mila anareo ankizy satria ny olona rehetra amin’izay tandrify azy dia manana anjara eo amin’ny fanompoana sy ny fampandrosoana ny firenena. Ny Filoham-pirenena dia miaramila ary mpitarika tafika, ka hampandresy amin’ny lafin’ny fampandrosoana, hiady amin’ny fahantrana eto amin’ny firenena no tanjona. Aoka ny zavatra vita no hitarafana ny ho avy, ny asa vita no hitarafana ny zavatra atao amin’ny ho avy”, hoy ny Filoha nanafatra azy ireo. Noporofoin’ny Filoha omaly fa tia manantona ny vahoaka ny tenany manoloana ny fidinana ifotony nataony teny amin’ny fokontany Ambohimanarivo. Nasehony fa tsy zanak’ ikalahafa ireo mponina eo anivon’ity fokontany ity, ary nampahafantarin’ireo vahoaka tao an-toerana fa hainy daholo ny zavatra ilain’ny vahoaka malagasy eto amin’ity firenena ity.
Manerana izao tontolo izao dia mitodika amin’ny tanora ny fiarahamonina, ary ny vondrona afrikana dia nametraka mihitsy ireo vondron’olona ireo ho laharam-pahamehana. Ho an’i Madagasikara, dia nametraka ny tanora ho ivon’ny fisandratan’ny vina ara-toekarena ny ...Tohiny